डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसार चिकित्स शिक्षा अध्यादेश पास - TV Annapurna
काठमाडौं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पास गरेको छ । अध्यादेश पास भएपछि उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाईने भएको छ । यद्यपी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्न भने बाँकी नै छ ।
अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने उल्लेख छ । यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्वन्धन दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
यससँगै मनमोहन, काठमाडौं नेशनललगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ ।
अध्यादेश नयाँ संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि पास हुन सकेन भने स्वत खारेज हुनेछ ।
संसदबाट विधेयक पास नभएपछि सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेको थियो ।